Rooting Samsung Glaxy Ace GT-S5839i Ginger V 2.3.6 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Samsung Rooting Rooting Samsung Glaxy Ace GT-S5839i Ginger V 2.3.6
Ye Naing at 1:45:00 PM Samsung Rooting,
Glaxy Ace ဖုန်းက ကိုင်သူအတော်များပါတယ်၊ Root လုပ်ပုံကလည်း ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျ။
ဆိုင်မသွားဘဲ ကိုယ်တိုင် Root လုပ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
ပထမဆုံး လိုအပ်မယ့် Update Zip ကိုဒေါင်းပါ။
Zippyshare : Dropbox : CyberLocker : 4Shared
* SD အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်၊ SD ကိုအမျိုးအစားကောင်းတာလေးသုံးပေးပါ။
* Battery ကိုအနည်းဆုံး ၇၅% အားသွင်းပေးထားပါ။
ဒေါင်းထားတဲ့ Update Zip ကို SD card ထဲ ဒီအတိုင်းပဲထည့်ပါ၊ ဖြည်စရာမလိုပါ။( SD card အဟောင်းဆိုရင်တော့ Format ရိုက်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။)
Recovery Mode ၀င်ပါမယ်၊(ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ၊ ဘက်ထရီပါဖြုတ်ထားချင်ရင် ခဏဖြုတ်ထားပါ၊ ပြီးရင် Volume Up & Home Key & Power ကိုတွဲရက်ဖိထားပါ၊ စက္ကန့် ၂၀ ကျော်ကြာပါမယ်၊ recovery စာတန်းတွေတက်လာလာခြင်း လက်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့ဦး၊ Reboot ပြန်တက်သွားတတ်လို့ပါ။ ၃ ၊ ၄ စက္ကန့်လောက်ဆက်ဖိထားပါဦး၊ )
Volume Down Key နဲ့ apply update from sdcard ကိုရွေးပါ၊
Home Key နှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ်၊
root5GT-S5839i uploaded by ...... . zip ကိုရွေးပါ၊
Home Key နှိပ်
ပုံထဲကလို အလုပ်လုပ်နေပါမယ်၊ Install from sdcard complete. စာတန်းတက်လာရင်တော့ ထိပ်ဆုံးက Reboot system now နှင့် ပြန်ထွက်ပါမယ်။ Reboot တက်တာဆုံးအောင်စောင့်ပါမယ်၊ ပြီးရင်တော့ Applications တွေထဲမှာ Super Su ကိုတွေ့ရမှာပါ။
Root လုပ်ခြင်း ပြီးပါပြီ။ မြန်မာစာအတွက်ကတော့ Myanmar Font Changer တစ်ခုခုနဲ့ချိန်းပြီး မြန်မာ ကီးဘုတ်တင်လိုက်ရင် ရပါပြီခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ....
Unknown July 10, 2013 at 11:20 PM
အကိုရေ ဒီ Update Zip ဖိုင်နဲ့ samsung Ace s5660(Gio) ကိုလည်း root လုပ်လို့ရပါသလား